P kpara akpa, p Rice Bag, p kpara Fibc akpa - Jintang
Anyị bụ ndị ọma họọrọ n'etiti n'elu emepụta, exporters na suppliers nke BOPP Rice akpa. Akpa ndị a na-eji TOP mma akụrụngwa (100% ọhụrụ eyi) na ọkaibe technology. A na-eji akpa ndị a na-achụ aja akpa ọka osikapa ma na-achọkarị ebe niile n’ụwa. Ndị ahịa anyị nwere ike ịnweta akpa ndị a n'aka anyị na agba agba na nha dị iche iche site na 5 ruo 75 kgs dịka nkọwa ha. Anyị na-enye ndị a BOPP osikapa akpa na ika ụlọ aghụghọ na kasị echekwa ego na ahịa.
AD * STAR® bụ echiche a ma ama maka akpa ntụ maka ihe eji eme ntụ - nke eji eme ihe n'ụwa niile, nke mba niile mara, ma mepụta naanị na igwe Starlinger. A na-eji akpa na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-enweghị ihe mgbochi site na ikpo ọkụ nke mkpuchi na akwa ndị ahụ. N'ihi njirimara nke ihe onwunwe na usoro mmepụta pụrụ iche, ịdị arọ nke ọkara kilogram AD * STAR® akpa nha nwere ike ịdị obere ka gram 75. Apapa 3-oyi akwa akwụkwọ ga-atụle ihe dị ka gram 180 na akpa ihe nkiri PE-gram 150. Iji akụnụba eme ihe n'ụzọ akụ na ụba anaghị enyere aka belata ọnụahịa.
Boda bụ otu n'ime ndị na-emepụta ihe na inye ọtụtụ nri nri FIBC akpa na ụkpụrụ mba dị iche iche na-ehicha ụlọ dị ọcha, ọtụtụ igwe na-aga n'ihu, na-ebugharị ụlọ ọrụ njikwa ngwa ngwa, ndị ọrụ nwere ahụmịhe na ndị ọkachamara, yana ndị polymer nri dị elu na ihe mgbakwunye ndị ọzọ akwadoro. .
Anyị bụ ndị a nnukwu ulo oru enterprise amị elu àgwà nkwakọ akpa ke North China.we nwere abụọ ụlọ mmepụta ihe na, kwa afọ mmepụta bụ ihe karịrị 100 nde dollar. Anyị ji obi ụtọ nabata ndị ahịa ọ bụla na ụlọ ọrụ anyị maka nkwekọrịta.
Site Block Bottom Valve Bag ka eyi kpara akwa, anyị proprietary elu akụrụngwa nwere ike inye ngwaahịa na-enweghị atụ àgwà ọ bụla na ngwa izute ahịa chọrọ.Kpọtụrụ Onye Ọkachamara
Showlọ ọrụ Gosi
Kwa Akwa Onodi
Otu Ahịa 1
Ọga ya na ndị otu ya
Ndị ndu gọọmentị
Ezubere Imewepụta ciment akpa
20lọ ọrụ 20 kacha elu na Plastic Industry
Igwe Igwe Ad
Azụ azụ (3)
Shijiazhuang Boda Plastic Chemical Co., Ltd. e guzobere na 2003, ma nwekwaa ụlọ ọrụ nwere aha kpamkpam aha ya bụ Hebei Shengshi Jintang Packaging Co., Ltd. Anyị nwere ngụkọta nke ụlọ ọrụ atọ nke anyị, ụlọ ọrụ mbụ anyị Ọ na-anọ karịa 30,000. square mita na ihe karịrị 300 ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'ebe ahụ. Factorylọ ọrụ nke abụọ dị na Xingtang, na mpụga obodo Shijiazhuang. Aha ya Shengshijintang Packaging Co., ltd. Ọ nwere ihe karịrị mita 45,000 na gburugburu ndị ọrụ 300 na-arụ ọrụ ebe ahụ. Factorylọ ọrụ nke atọ Ọ karịrị 85,000 square mita na gburugburu 300 ọrụ na-arụ ọrụ n'ebe ahụ Anyị isi ngwaahịa na-okpomọkụ-kaa akara
Anyị Factory Ntụkwasị obi ịdị mma Ahịa
Ihe bara uru anyị 01
Nha ụlọ ọrụ (Sq.meters)
Anyị nwere ụlọ ọrụ atọ nke onwe, nke mbụ na-ekpuchi mpaghara nke mita 30,000, nke abụọ na-ekpuchi mpaghara nke square mita 45,000, nke atọ na-ekpuchi mpaghara nke 85,000 square. Kpọtụrụ anyị
Ihe bara uru anyị 02
Anyị nwere usoro nke ngwa ngwa sitere na extrusion na nkwakọ ngwaahịa. Anyị nwere zuru okè quality ule ngwá iji hụ na ngwaahịa mma nditịm osobo chọrọ nke ndị ahịa.Kpọtụrụ anyị
Ihe bara uru anyị 03
Mpịakọta Ahịa Kwa Afọ (Nde US $): US $ 10 Million - US $ 50 Million Volume Purzụ Kwa Afọ (Nde US $): US $ 2.5 Million - US $ 5 Million. Kpọtụrụ anyị
Gbochie Bottom Valve Bag, Pp ndepụta Bag, Bopp laminated akpa, Gbochie Bottom Valve Cement Packaging Bag, P kpara akpa, P ciment Block Bottom valvụ Bag, Ngwa niile